ikhaya » iindaba » I-GLOOKAST Inika amandla iDynamic Ingest kwi-IBC
I-GLOOKAST Inika amandla iDynamic Ingest kwi-IBC
GLOOKAST, umvelisi kwiinkqubo ze-MXF zokuhambisa izakhono zokusasazwa, ukuveliswa kweedrama, kunye nokuqhubela phambili kweshishini, namhlanje umemezele ukuqaliswa kwe-interface esekelwe kwi-web-based interface, i-Glooport mediafireproducer, IBC.
I-Glooport mediaproducer yenza ukuba iindidi zeendaba kunye neemethadatha ezinamandla kwiintlobo ezahlukeneyo ezicelo, kwilifu, kunye nasentsimini, kunye okanye ezingenaxhunyelelwano oluhambelana nazo zonke iziseko zophuhliso. Ixhasa zonke iifom zefayile eziphambili.
"Siyakuvuyela ukuqaliswa kweGlooport media generator kwi-IBC," kuchaza uFelipe Santos, CTO, Glookast. "Kwiimeko zokusasazeka kweendaba, kunye nesidingo sokwenziwa kwangoko kwiphina indawo, sikholelwa ukuba esi sicombululo siya kuguqulwa ngokwenene kwinkqubo elula, eyinkcitho eninzi kwaye ephumelelayo."
Isisombululo sinokuxhasa abasebenzisi abaninzi ngeefayile ngamnye kunye nezicwangciso zeseshoni. Inceda ukuphathwa kakuhle, ukudala, nokuhlela imethadatha, kunye nokunyanzelisa ukufakwa kweetetadata ezifunekayo. Ngomklamo oqokelele ngokupheleleyo, unikeza iindlela ezahlukeneyo zokusebenza ukuze zihambelane nohlobo lokuthunyelwa.
I-GLOOKAST iya kubonisa i-Glooport media generator kwi-booth yayo (7.D03) kwi-IBC esuka kwi-15th ukuya 19th EyoMsintsi. Ukufumana intlanganiso, nceda uqhagamshelane info@glookast.com
Eyasungulwa kwi-2009, iGLOOKAST ihlaziya kwakhona ukusasazwa kwe-MXF-based, ukuveliswa kwemidlalo, kunye nokuqhubela phambili kwemisebenzi yokuqhuba umsebenzi. I-Gloobox kunye ne-Glooport yeemveliso zeprojekthi zenziwe zisuka kumhlaba kwaye zinamandla okulungisa iindaba, ezemidlalo, i-archive, ukubuyiswa kweentlekele kunye nemisebenzi yokusebenza emva kokuvelisa. Ngetekethi yezixhobo ezizenzekelayo kunye nezixhobo ezinokuzikhethela kakhulu, i-GLOOKAST yenza ukuphunyezwa kwenyaniso yee-multi-format, i-multi-resolution resolution ishicilelwe. Iimveliso ze-GLOOKAST zisetyenziswa kakhulu ngabasasazo, abavelisi bokuqulatha, iiyunivesithi kunye nezibonelelo zokuvelisa emva kwe-USA, eLatin America naseYurophu. Ngolwazi olungakumbi: Www.glookast.com.
Inombolo: + 44 1570 434632
I-Mob: + 44 7733 231922
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Injini yeVidiyo	2017-09-13
Previous: I-QYOU ikhulisa ingqalelo kwiIndiya ngokusebenzisana kunye namafomathi amasha
next: Ukusasazwa kweeNkqubo ezingenazintambo ze-Wireless transmitter zigqiba umcimbi we-200th kwi-Broadcasting Broadcast
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "IGLOOKAST Inika amandla iDynamic Ingest kwi-IBC". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/glookast-enables-dynamic-ingest-at-ibc/. Enkosi.